၁၉ နှစ်မြောက် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ကို ကြည်နူးစွာ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ David Beckham တို့စုံတွဲ
On July 9, 2018 July 9, 2018 By Aminnyar
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွင်မကသေးပါဘူး ကမ္ဘာကျော် စုံတွဲတစ်တွဲဖြစ်တဲ့ David Beckham နဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ Victoria တို့ရဲ့ ၁၉ နှစ်မြောက် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ၁၉ နှစ်ဆိုတဲ့ ကာလအပိုင်းအခြားဟာ ပါးစပ်နဲ့ပြောလိုက်ရင်သာ ခဏလေးလို့ ထင်ရတာပါ။ တကယ့်လက်တွေ့ဘဝထဲမှာ ဖြတ်သန်းရမယ်ဆိုရင်တော့ သိပ်ကို ရှည်ကြာလွန်းလှပါတယ်။ ပြီးတော့ မတူညီတာတွေကို ညှိနှိုင်းလို့ သူစိမ်းနှစ်ယောက်ပေါင်းစည်းပြီး အတူလက်တွဲတည်ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုရဲ့ ဖြတ်သန်းမှုကာလအတိုင်းအတာရ ပြောရမယ်ဆိုရင်လည်း ပိုပြီးကြာမြင့်လှတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး… အထူးသဖြင့် ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ငွေကြေး၊ ရုပ်ရည်၊ အောင်မြင်မှု စတာတွေ ပြည့်စုံနေခဲ့ကြလို့ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်တွေများလှတဲ့ ဟောလိဝုဒ်စုံတွဲတော်တော်များများရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဟာ သိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ယူပြီးကြလို့ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ထစ်ခနဲဆိုတာနဲ့ စလယ်ဝင် ဖင်မည်းခင်ကတည်းက ကွဲကြဖို့ ပြင်နေတတ်ကြတာမျိုးပဲ မဟုတ်လား။ ဒါပေမဲ့ Beckham တို့ မောင်နှံကတော့ ကွဲဖို့ကွာဖို့ ဝေးရုံတင်မကဘူး။ သူတို့မိသားစုထဲမှာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် တိုးပွားလာခဲ့တဲ့ သား၊ သမီးတွေနဲ့ သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်း ကြည်နူးပျော်ရွှင်မဝ ဖြစ်နေခဲ့လေတာ အခုလက်ရှိအချိန်အထိပဲလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး လောကသဘာဝ ထုံးစံအတိုင်း သူတို့အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ဘေးလူတွေက ဘယ်လိုထင်မြင်ချက်တွေပဲ ပေးပေး၊ ကွဲကြကွာကြမယ်ဆိုတဲ့ ကောလဟာလတွေက ဘယ်လောက်ပဲ ထွက်လာထွက်လာပေါ့လေ။ သူတို့ကတော့ အဲဒီလှိုင်းတံပိုးတွေကို အပြုံးမပျက်စေဘဲ ကြံ့ကြံ့ခံခဲ့ကြရင်း အခုဆို မင်္ဂလာသက်တမ်းက ၁၉ နှစ်တောင် ပြည့်သွားခဲ့ပြီဖြစ်လို့ ချီးကျူးစရာတော့ ကောင်းလှပါတယ်။
I think they love him ?x Truly the best daddy @davidbeckham x missing u @brooklynbeckham x
အကျော်အမော် ဘောလုံးသမားဟောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Beckham နဲ့ တစ်ချိန်တုန်းက အရမ်းအောင်မြင်ခဲ့ဖူးတဲ့ Spice Girl မိန်းကလေးအဆိုအဖွဲ့က အဖွဲ့ဝင်အဆိုတော်ဟောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်သလို၊ လက်ရှိအချိန်မှာလည်း အောင်မြင်တဲ့ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့ Victoria တို့ဟာ သူတို့ရဲ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာ အမှတ်တရ ဖြစ်စရာလေးတစ်ခုကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်သား ကြည်ကြည်နူးနူးနဲ့ နေ့လယ်စာစားနေကြတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံကို သူတို့ရဲ့ Instagram တွေပေါ်မှာ အတူတူ တင်ခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၄၃ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Beckham ဟာ သူတင်တဲ့ပုံလေးမှာ…. “Wow… ၁၉ နှစ်တောင်ရှိခဲ့ပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉ နှစ်တုန်းက ဒီလိုနေ့ရက်မှာ ငါဟာ ခေါင်းအစ ခြေအဆုံး ခရမ်းရောင်ဝတ်စုံကို ၀တ်ခဲ့တာပဲ။ အမေကောင်းတစ်ယောက်လည်းဖြစ်သလို ထူးဆန်းအံ့သြဖို့ကောင်းတဲ့ မိန်းမရေ… ပျော်ရွှင်စရာ နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်ပါစေ။ မင်းကို ငါချစ်ပါတယ်” ဆိုတဲ့ Caption လေးကို ရေးထိုးပြီး သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့ Brooklyn, Romeo, Cruz နဲ့ Harper တို့ကိုပါ Tag ထားခဲ့ပါသေးတယ်။
19 Years WOW … This time 19 years ago I was dressed from head to toe in purple ? … Happy anniversary to the most amazing wife & mummy … Love You x @brooklynbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven
၄၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Victoria ကတော့ သူတင်တဲ့ သူတို့မောင်နှံရဲ့ပုံလေးမှာ… “၁၉ နှစ်တောင် ရှိသွားပြီ။ ကျွန်မ ရှင့်ကို အရမ်းချစ်ပါတယ်” ဆိုတဲ့ Caption လေးကိုပဲ ရိုးရိုးလေး ရေးထားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့တစ်မိသားစုလုံးကိုချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေနဲ့ မိတ်ဆွေတွေကလည်း ၁၉၉၉ ခုနှစ်တုန်းက လက်ထပ်ခဲ့ကြတဲ့ သူတို့မောင်နှံရဲ့ ၁၉ နှစ်မြောက် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့ကနေစပြီး နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာမှာလည်း ခုလိုပဲ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးနေကြပါတယ်တဲ့။
PREVIOUS POST Previous post: Turks မှာ ချစ်သူနဲ့အတူ ပျော်နေခဲ့တဲ့ Taylor Swift
NEXT POST Next post: ဖလော်ရီဒါမှာ ရှိုးပွဲဆိုရင်း အဖမ်းခံလိုက်ရပြန်တဲ့ Chris Brown